Football Khabar » बार्सिलोनाद्वारा भिडाल बेच्ने तयारी : मूल्य कति ?
बार्सिलोनाद्वारा भिडाल बेच्ने तयारी : मूल्य कति ?
स्पेनिस बार्सिलोनाले आफ्ना चिलियन मिडफिल्डर अर्टुरो भिडाल बेच्ने तयारी गरेको छ । क्रोएसियन इभान राकिटिक क्लबमै रहने करिब पक्काजस्तै भएपछि बार्सिलोनाले बेच्ने खेलाडीको सूचीमा भिडाललाई राखेको छ ।
बार्सिलोनाले भिडाल बेच्ने तयारी गरेपछि इटलियन इन्टर मिलानले बार्सिलोनासँग लोन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बार्सिलोनाले मिलानको लोन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै स्थायी खरिद प्रस्ताव मात्रै सुन्ने जवाफ पठाएको छ ।
चिलीका ३२ वर्षीय यी खेलाडीलाई बार्सिलोना अघिल्लो सिजन जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखबाट २७ मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो । तर, बार्सिलोनाले नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि उसले टोलीमा रहेका अन्य खेलाडी बेच्न खोजिरहेको छ ।
मिलानले बार्सिलोनासँग एक सिजन लोनका लागि अफर गरेको थियो । तर, बार्सिलोना आफ्ना खेलाडी लोनमा दिन तयार भएन । बार्सिलोना भिडाललाई २०–२५ मिलियन युरोसम्ममा बेच्न तयार देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति ७ भाद्र २०७६, शनिबार ०६:२३